राप्ती नगरपालकिा १ पिप्ले ज्योतिनगरका किसान रत्नबहादुर बर्तौलाको माछा पोखरीका माछाहरु भकाभक मरेका छन् । उनको चार कट्ठा जलाशयमा बेच्नका लागि झिक्न तयार माछाहरु थिए । बुधबार बिहानबाट एकाएक माछाहरु मर्न थालेको उनले बताए ।
करिव २५ लाख रुपैयाँ बराबरको माछा मर्‍यो, कसले हालिदियो पोखरीमा विष ?
माछापालनले मनग्य कमाइ हुने देखेर नजिकैको माछा गाउँको देखासिकीबाट करैयामाई गाउँपालिका-१ का दीपक पासवानले गत वैशाखमा डेढ बिघा खेतमा पोखरी खनाए । जेठदेखि ऋण गरेर माछापालन सुरु गरे । माछा स्यारहार गर्न दाना, पिनालगायततमा हजारौं रकम खर्च गरे । मंसिर १५ देखि माछा मारेर बेच्ने सपना थियो थियो । तर, उनको सपना पूरा हुन पाएन ।
चियामा विष हालेर खुवाउने पक्राउ
नुनचियामा विष हालेर खुवाएको अभियोगमा प्रहरीले एक जनालाई सोमबार सार्वजनिक गरेको छ ।
खानेपानीको मुहानमा विष ?
रोराङ–३ बेनिघाटको कात्राक बस्तीका लागि वितरण गरिएको खानेपानीको मुहानमा विष हालिएको आशंकामा छानबिन सुरु भएको छ ।